खुसिको खबर : नेपालमा आज मात्रै २ सय ५३ जनाले कोरोना जितेर घर फर्के ! ( विवरण सहित ) – Life Nepali
खुसिको खबर : नेपालमा आज मात्रै २ सय ५३ जनाले कोरोना जितेर घर फर्के ! ( विवरण सहित )
२४ असार, काठमाडौंः नेपालमा थप २ सय ५३ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले थप २ सय ५३ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको बताएका हुन् । योसँगै हालसम्म नेपालमा ७ हजार ७ सय ५२ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
नेपालमा थप २ सय ५५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय २ सय ५५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टि भएको बताएका हुन ।
उनका अनुसार देशभरका विभिन्न स्थानमा गरिएको परिक्षणका आधारमा थप २ सय २ सय ५५संक्रमण भएको पुष्टि भएको हो । हालसम्म नेपालमा कुल १६ हजार ४ सय २३ कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । त्यस्तै, नेपालमा कोभिड १९ बाट निको हुनेको ७ हजार ७ सय ५२ संख्या पुगेको छ ।
Previous जग्गा मेरो हो भन्ने दा’बी भारतको, लालपुर्जा र नक्सा नेपालको हु’दा , वि’वाद यहाँसम्म पुग्यो ! ( हेर्नुहोस )
Next बिहे गर्दा गर्दै बेहुलीको मृ’त्यु भएपछि ..